News - Waa maxay farqiga u ah muujinta LED, LCD, Projector Iyo DLP?
Waa maxay farqiga u ah muujinta LED, LCD, Projector Iyo DLP?
Laydhku waa "Iftiiminta Diode", qaybta ugu yar waa 8.5 inji, waxay awood u yeelan kartaa dayactirka iyo isbeddelka cutubka, waqtiga nolosha LED-ka in ka badan 100,000 oo saacadood.
DLP waa “Digital Light Procession” cabirka qiyaastii 50inch ~ 100inch time waqtiga nolosha qiyaastii 8000 saacadood. u baahan tahay beddelaad jumlo ah haddii guluubka la shaqeynayo iyo guddiga ay dhibaato ka jirto.
1. La qabsiga deegaanka ee dhalaalka
DLP \_ LCD muujinta dhalaalkiisu ma sarreeyo. Iftiinka duruufaha ayaa si adag u xaddidan ； xafiiska nalka sare ee aan habboonayn ama deegaanka qolka kontoroolka.
Iftiinka muujinta LED wuxuu hagaajin karaa inta udhaxeysa 600-1500cd ， suudh jawiga kaladuwan.
2. ifafaale milicsi
Muuqaalka LCD ， hore wuxuu ku qalabeysan yahay guddi hage tarjuma ama iftiin ah.
DLP codsi wax ku ool ah, waxay yeelan doontaa saameyn milicsi leh.
Laydhka maxaa yeelay waa cutub iftiin iskiis ah, iyo guddi madow oo madoow ah surface dusha laambad madow, sidaas darteed muujinta midabka ee xagal kasta waa la ilaalin karaa iyada oo dhawrsan.
3. aragtida xaglaha isbarbar dhig
4. Isbarbardhiga saameynta muuqaalka
5. barbardhiga saamiga
LED wuxuu adeegsadaa laambad madow oo hoggaamineysa, dusha sare ee shaashaddu waa qaab dhismeedka nooca nuugista. ku dhowaad ma jiro xariiq toosan oo iftiiminaysa iftiinka, Sidaas awgeed saamiga isbarbardhiga shaashadda LED-ka oo aad u sarreeya illaa 4000: 1, wuxuu ka dhigayaa shaashadda bandhigga LED-ka fiiqan oo cad.
Inta badan saamiga farqiga baareyaasha DLP wuxuu noqon karaa 600: 1 ilaa 800: 1, qiimaha hooseeya sidoo kale wuxuu noqon karaa 450 ： 1。LCD cabirka isbarbar dhiga qiyaasta wuxuu ku saabsan yahay 400: 1 ， iyo qiimo hoose oo kaliya 250 ： 1.
Darbiga fiidiyowga DLP
DLP shuruudaha deegaanka aad ayey u sarreeyaan, sida heerkulka, huurka, boodhka, iftiinka, iwm, gaar ahaan shaashadda ayaa ah tan ugu nugul, xoq qadka khafiifka ah lama tirtiri karo lamana hagaajin karo, waxaa jira culeys badan oo aan ahayn muddo Waqtiga ay dib u soo celin doonto, haddii kale sawirku si otomaatig ah ayuu u jaan qaadi doonaa. Isbarbardhiga dhabta ah ee DLP waa mid aad u hooseeya, oo ka muuqda muuqaalka mugdiga cilladaha muujinta, taas oo ah, sawirro badan oo muuqaal mugdi ah ma cadda, ifafaalahaani waa mid aad u muuqda. Sida buug-yaraha ayaa arki kara muuqaalka mugdiga ah, shaashadda DLP ee madow, ma kala sooci karo, marka marka loo isticmaalo kormeerka sawirrada, tayada muuqaalka ayaa si weyn loo dhimi doonaa. DLP projector daciif kaliya hal, taas oo ah, “saameyn qaansoroobaad”, waxqabadka gaarka ah waxaa si fudud looga soocayaa midabka casaanka, cagaarka iyo buluuga ah ee saddexda ah, wuxuu umuuqdaa roob qaansoroobaad.
Darbiga fiidiyowga LCD
Faa'iido darrada muuqata ee soosaaraha LCD waa in heerka madow uu liito oo kala duwanaanshuhu uusan aad u sarreynin. Midabka madow ee baareha LCD wuxuu had iyo jeer u eg yahay cawl, qeybta hadhka lehna waa mugdi iyo faahfaahin la'aan. Tani waa mid aan ku habbooneyn fiidiyaha ciyaarta, taas oo aan aad ugu fiicnayn filimka, laakiin farqi weyn uma dhexeeyo borojektar DLP marka la ciyaarayo ereyada. Cilladaha labaad ayaa ah in saameynta uu leeyahay borotokoolka LCD uu soo bandhigayo qaab dhismeedka pixel, daawadayaashuna waxay umuuqdaan inay ku daawanayaan shaashadda shaashadda . Qaabka SVGA (800 x 600) ee borojektar LCD ah, iyadoon loo eegin cabirka sawirka shaashadda, waxaa si cad loogu arki karaa shabakadda 'pixel grid' haddii aan la adeegsan wax soo saar xallin sare leh. LCD waxay hada bilawday inay adeegsato qalabka muraayadaha yar yar (MLA), waxay hagaajin kartaa hufnaanta gudbinta ee qaabka XGA ee looxyada LCD, faafitaanka shaashadda ee pixels, shaashadda qarsoon ee aan muuqan ee pixel, iyo muuqaalka sawiradu ma keenayo wax saameyn ah. Waxay yareyn kartaa qaabdhismeedka pixel-ka ee LCD isla markaana waxay la mid tahay mashruucyada DLP, laakiin weli xoogaa farqi ah ayaa u dhexeeya.
HD LED faa'iido
1. In ka badan 100,000 oo saacadood oo nolosha ah
Waxqabadka midabka 3.Best
Waxqabadka kala-baxa kuleylka sare
Qiimaha dayactirka hooseeya
1. In ka badan 10 0000 saacadood nolosha
Dusha sare ee shucaaca ayaa isku dhafan, qaabdhismeedka saxan aluminium ah, Dhamaan kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka, wuxuu noqon karaa kuleylka ugu fiican ；
Kala bixida kuleylka ee bogga: Kuleylka ku jira sanduuqa ayaa ka kala firirsan dhinacyada, ka dibna isku xira alwaaxyada, Qolofta dambe ee labada dhinac ee sameynta kanaallada sare iyo kan hoose, isticmaalka cadaadiska hawada si loo sameeyo hawo sare iyo hoose mabaadi'da wareegga, kuleylka si buuxda u baabi'inta.
Mabda'a bandhigga ee RGB iftiinka lama filaanka ah wuxuu hayaa sax ahaanta midabka, isagoo iska ilaalinaya midab luminta iyo leexashada ay keento maaddada iyo wadada iftiinka socda ee tikniyoolajiyadda iftiinka gadaal iyo odoroska.
YWTLED All In One LED - TV waa cutub iftiin iska yimaada, oo leh guddi madow oo matte madow ah, dusha iftiinka iftiinka madow, si waxqabadka midabka ee xagal kasta oo muuqaal ah loo ilaalin karo sidiisa.
Qiimaha dayactirka oo hooseeya
Qaybta caadiga ah ee '， panel panel' waxay ka kooban tahay qaybo yaryar; pixels bandhig waxay ka kooban yihiin nal gaar ah oo nalka loo yaqaan 'LED'.
Haddii ay jirto meel necrotic ah, ku beddel unug dayactir ah oo dayactir laambad LED ah ；
Haddii gudigu u muuqdo mid aan la dabooli karin, shaashad yar oo la soo bandhigi karo ayaa la beddeli karaa ；
Tusaale ahaan, aagga bandhigga 32-inji ah waa 4% oo keliya guddi dhaqameedka.
Jaangooyada guud ee hadda jira ayaa ah 46-inji, 55-inji, iyo 60-inji oo kala-jajab ah, oo leh qiimo jaban.
Uma kala duwanaan ka dib dayactirka unugga
Markaad beddesho hal LED, waxaad dooran kartaa laambadda LED-ka ee loogu talagalay wax soo saarka. iyo dhalaalka nuxurka hal dhibic ayaa la fulin karaa si looga dhigo mid joogto ah ；
Markaad bedesho moduleka cutubka, moduleka oo dhan iyo alwaaxyada waxaa loo isticmaalaa hagaajinta isku dheelitirka, sidaa darteed heerkulka midabka iyo dhalaalka waxay la jaan qaadayaan xaaladda hadda jirta ee shaashadda mashruuca.
Darbiga fiidiyowga 'LCD' Farqiga weyn kadib hagaajinta cutubka
Midabka beddelka iyo dhalaalka dhammaantood waa gobol cusub, hufnaan la'aan, aad u labbis iyo dhalaal ；
Iyo cutubyo kale oo asal ah, ka dib markii waqti dheer la isticmaalay, yaraynta nuurka iyo shaashadda iyo arrimo kale, sida isbeddelka budada iftiinka, midabka, iyo dhalaalka ayaa aad hoos ugu dhacay ；
Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya guud ahaan saamaynta muuqaalka。
Waqtiga boostada: Nofeembar-07-2020